Ikhaya AMAZIKO E-EUROPEAN FOOTBALL I-Michael Obafemi yobuntwana Ibali leNqaku leNgcaciso yeBantwana yeNqaku leMicold
Iinkcukacha zethu zeMicrosoft Obafemi's Biography eneenkcukacha ozifundileyo ngebali lakhe lobuNtwana, uBomi boSapho, abazali, uBomi boNothando (Intombazana kunye noMfazi), indlela yokuphila, iNetworth kunye noBomi boBuntu. Kwiphepha elingasentla, sikunika umfanekiso ogcweleyo webali lakhe lobomi, ukuqala kwiminyaka yakhe yobudala ukuya xa wayedumile.
Ewe, wonke umntu uyazi igama losapho lukaMichael Obafemi likhumbuza omnye ngalo Obafemi Martins-INigeria phambili eyaziwa ngesantya sokuduma. Nangona kunjalo, ababaninzi abaye bafunda i-Biography kaMichael Obafemi eveza okuninzi ngaye. Ngoku, ngaphandle kokudibanisa okunye masiqalise.
UMichael Obafemi Ibali lobuNtwana:
Kwabaqalayo bebhayiloji, ubizwa ngokuba "yiMica." UMichael Oluwadurotimi Obafemiwas wazalwa ngomhla we-6th kaJulayi 2000 kwidolophu elikomkhulu laseDublin eIreland. Umdlali webhola waseIreland wazalelwa kunina, uNksz Bolajoko Oredein kunye notata omncinci owaziwayo.
Imvelaphi yoSapho lukaMichael Obafemi:
Okokuqala nokuphambili, umntu ohlaselayo ungummi waseIreland. Nangona kunjalo, iziphumo zophando ezenziweyo zokufumanisa imvelaphi yosapho uMichael Obafemi zibonisa ukuba ungowesizwe saseYoruba.
Olu hlanga lubalaseleyo lwasentshona yeNigeria. Ngokuthetha, abazali bakaMichael Obafemi ngamaAfrika kunye neengcambu zaseNigeria. Umdlali webhola uqobo nguIreland kwaye unegazi laseNigeria elihamba ngethambo lakhe.
Ngaba uyazi ukuba ubuhlakani bebhola wayesemncinci kakhulu xa uyise nonina bafudukela eNgilane? Kwakukho kwilizwe apho u-Obafemi oneminyaka eyi-4 waqala ukudlala ibhola kunye nomntakwabo omdala u-Afolabi Obafemi.
“Sasidla ukudlala ibhola ngaphandle kwendlu yam kwikhonkrithi. Umsebenzi wethu uquka ukukhahlela iibhola kwifandesi yommelwane de sibe siyaphazanyiswa, ”
uphawula umbetha wokuqalisa kwakhe ebholeni.
Inyani yile, akazange avele kwintsapho etyebile kodwa ekumgangatho ophakathi. Ngelixa eNgilane, abazali bakaMichael Obafemi bahlala eChingford. Le ndawo sisithili esingaphantsi kwedolophu eNorth East London. Utata kaMichael Obafemi no mama baqinisekisa ukuba baphathwa kakuhle. Ke, wakhula onwabile njengabaninzi bantwana kubumelwane beLondon East London.
Uqala njani uKhathalelo lweBhola ekhatywayo kuMichael Obafemi:
Xa ixesha belilungile, ikamva lomthandi webhola waqala ukubiza. Emva phayaa, abazali bakaMichael Obafemi bakubona kufanelekile ukunika inkoloseko yakhe ngendlela efanelekileyo. Ngenxa yoko, babona ukubhaliswa kwakhe koqeqesho kwiklabhu yobuntwana-iRyan FC eChingford.
UMichael Obafemi kwiminyaka yakuqala kunye neChelsea, iArsenal kunye neWatford:
Ukuphuhliswa komntwana oselula eChingford kwakukhawuleze kangangokuba waqhubekeka ukuchitha amanye amaxesha akhe omsebenzi wakhe kwizifundo ezahlukeneyo zebhola. Izifundo zibandakanya i-Chelsea, iArsenal kunye neWatford.
UMichael Obafemi Ubuntwaneni Ibali-Wayenomsebenzi wakhe wokwakha kwizifundo ezininzi zebhola. 📷: I-Twimg.
Kwincopho yolutsha luka-Obafemi kolutsha eWatford, ibhola ekhatywayo iyaziwa ukuba ifumene umva womnatha amaxesha ali-11 kumdlalo omnye. Emva koko, wakhululwa yi-klabhu esemncinci kwe-14.
UMichael Obafemi Biografia-Ibali lendlela eya kuLwazi:
Emva kokukhululwa kwebhola ekhatywayo eWatford, uthathe unyaka ngaphandle komdlalo omkhulu ukuze abonise ukuba uyayifuna ngokwenene na ibhola njengomdlalo wekhondo okanye hayi. Wacinga nangeendlela ezininzi zomsebenzi anokunyathela kuzo ukuba ibhola ayizange ihambe kakuhle. Banothando njengabo, abazali bakaMichael Obafemi babekhona ukumthuthuzela ngelo xesha lobomi bakhe.
Emva kokuthatha isigqibo, umntwana oneminyaka eli-15 wayehlala nomama wakhe babelane naye ngezicwangciso zakhe zekamva. Umama ka-Obafemi wamnika inkxaso yakhe epheleleyo, embongoza ukuba anike i-100% yeenzame zakhe kwezemidlalo. Ngombulelo wengcebiso yokuba ngumzali, umdlali webhola waseIreland wabuyela kwi-hobby yakhe yakudala.
UMichael Obafemi LifeStory -Indlela eya kuLwazi:
Akuzange kube kudala ngaphambi kokuba iprodigy yebhola ijoyine iLeyton Orient ngo-2015 unyaka omnye. Emva kwexesha wasayina eSouthampton ngo-2016. Waqhubekeka esenza ubuchwephesha bakhe kwiingcwele zabaJanuwari ngo-2018 ngexesha lokuzoba nge-1 neTottenham Hotspur.
Ngomhla wokuqala, u-Obafemi waba ngumdlali wesibini kumncinci ukwenza ukubonakala kwePremier League kwiSouthampton emva ULuka Shaw (Iminyaka eli-17 neentsuku ezili-116 ubudala). Kwiinyanga kamva ngoDisemba ngo-2018, u-Obafemi waba ngumdlali omncinci kwi-Southampton kwi-Premier League emva kokufumana amanqaku akhe okuqala kwabaNtshatsheli ngo-3-1 u-Huddersfield.
Ukusukela ngoko, wazenzela igama ngokuchasene neeklabhu ezinkulu- eyona yakutshanje yayiluthemba ithemba leMan United lokufikelela kwinqanaba lesithathu le-ligi emva kokuqalisa kwakhona kwe-2019/2020 ye-COVID-19 yebhola. Ngumbandela wexesha ngaphambi kokuba abe rhoqo kwaye emva koko, sibona iiklabhu ezinkulu zicela ukuba zisayinwe. Ezinye, njengoko besitsho, yimbali.
UMichael Obafemi- Intombazana encinci, Umfazi, Otshatileyo, Otshatileyo, Bantwana?
Iitalente zebhola ziye zadlula kwixesha lokugcina uthando lazo luyimfihlo. Ngenxa yoko kunzima ukuxelela ukuba ngubani intombi kaMichael Obafemi okanye ukuba ngokwenene unomfazi.
Umdlali okusafuneka abonwe nangaliphi na inenekazi elinokubizwa ngokuba yintombi yakhe okanye inkosikazi izama ngamandla ukuba yeyona nto ilungileyo ukuba kwinqanaba lebhola ekhatywayo. Nangona kunjalo, kungabanga thuba lide ngaphambi kokuba sibone iifoto zakhe nenenekazi elihle.
UMichael Obafemi uBomi bosapho:
Ukuba nendlu exhasayo ngokungathandabuzekiyo kuyeyona nto ibangela amandla okuqhubela phambili kubadlali bebhola eIreland. Apha, Sikulethela iinyani malunga nabazali bakaMichael Obafemi kunye nabantakwabo. Siza kuchaza iinyani malunga nemvelaphi yakhe. Ngoku iyaqala.
Malunga nabazali bakaMichael Obafemi:
Okokuqala kodwa kuncinci, akukho nto ingako eyaziwayo malunga notata ka-Obafemi Michael. Nangona kunjalo, siyazi ukuba umama wakhe uNksz Bolajoko Oredein ungomnye wabalandeli bakhe abakhulu. Ube soloko ekhona lo mdlali kwaye wayekhona ukumbukela esenza iqela lakhe lesizwe lase-Ireland xa wayeneminyaka eli-18 kuphela ubudala.
Yintoni egqithisile? IBolajoko Oredein iyenza inqaku leembophelelo yokuza umdlalo ngamnye wonyana wakhe nokuba usebhentshini okanye akunjalo.
Malunga noSapho bakaMichael Obafemi:
U-Afolabi Obafemi ngumntakwabo ohlaselayo. Bakhule bedlala ibhola kunye kwaye bobabini babekwinqanaba lolutsha lwaseLeyton Orient ngaphambi kokuba amakhondo abo athathe imikhokelo eyahlukeneyo. Umsebenzi ka-Afolabi ngumbono ongekho mthethweni. Udlale ikakhulu kumanqindi aphantsi ngaphambi kokufika eWingate naseFinchley, kwiCandelo lePremier League kwi-Isthmian. Nantsi i-Afolabi Obafemi.
Dibana nomzakwabo kaMichael Obafemi u-Afolabi. 📷: Thejournal
Malunga nezihlobo zikaMichael Obafemi:
Ukude nosapho lomhlaseli, iinkcukacha zokhokho bakhe zinokutshutshiswa eNigeria hayi eIreland. Oku ikakhulu njengoko kunxulumene notatomncinci noomakhulu nootatomkhulu bakhe. Ukongeza, oomalume baka-Obafemi, oomalume, abazala, abatshana kunye nabatshana.
Izibakala zoBomi baKho:
Masiqhubele phambili kubomi buka "Mica" ngaphandle koqeqesho kunye nokuhlukumeza abakhuseli. Ngaba uyazi ukuba kukho isivumelwano qho xa abahlobo, usapho kunye namaqela eceliweyo bebuzwa ukuba bachaze umntu wakhe?
Bangqina ukuba u-Obafemi ngumntu onobuchule bokudala, ozinzileyo, onemvakalelo okrelekrele kunye namabhongo njengabantu abanophawu lweZodiac lungumhlaza. Uyakuthanda ukuqubha, ukuhamba, ukubukela iimovie, ukuchitha ixesha elisemgangathweni nosapho kunye nabahlobo phakathi kwezinye izinto anomdla kuzo kunye nezinto azithandayo.
Iinyani zeendlela zokuphila:
Ukwazi ukuba ubutyebi bebhola ekhatywayo kunye nendlela ayisebenzisa ngayo imali yakhe kwisandi ngokuqinisekileyo kuya kukunceda ube nomfanekiso ngqondweni wakhe.
Ukubaluleka kukaMichael Obafemi weNet:
Ngexesha lokubhalwa kweBio yakhe (2020), ubusazi ukuba umvuzo wakhe wonyaka sisibalo esingama-600,000 eedola (525,000 Pound)? Oku kubeka umnatha kaMichael Obafemi oxabisa i-1.7 yezigidi zee-Euro. Ngoku, makhe ndikuxelele indlela umntu ohlaselayo ayenza ngayo kwaye ayichitha njani imali yakhe.
Akukho nzululwazi ye-rocket ukuba u-Obafemi wandisa njani ubutyebi bakhe ngenxa yebhola njengoko sisazi ukuba ngumdlalo odumileyo. Ngapha koko, imali ayifumanayo kwizibonelelo ezaneleyo zanele ukugcina iimoto zakhe zangaphandle kunye nokugcina indlu ebizayo iqhuba.
Izibakala zikaMichael Obafemi:
Ukubhalwa kwethu kwi- "Mica" (igama lakhe lesidlaliso) kuya kuba kungalunganga ukuba asizifezekisi iimfuno zentloko. Ngokwenjenje sizisa iinyani ezimbalwa ngomhlaseli ngeenjongo zokukunceda ufumane umfanekiso opheleleyo ngaye.
Inyani # 1 - FIFA 2020 Inqanaba:
I-Obafemi inesilinganiselo esibi kakhulu seFIFA 2020 yamanqaku angama-67. Umlinganiso onjalo awuthethi kakuhle ngesimo sakhe njengo-Striker. Ngokuqinisekileyo abalandeli abonwabanga luphuhliso kwaye bebesoloko bemtsalela umnxeba.
Inyani # 2 - I-Trivia:
Bambalwa kuphela abantu abayaziyo into yokuba unyaka wokuzalwa ka-Obafemi-2000 ubalulekile kwinani leziganeko zobugcisa. Inqanawa enkulu yeHlabathi yeFerris Wheel okanye i-Observation Wheel (iLondon eye) yavulwa ngonyaka ka-2000. Ikwangunyaka omnye apho iiDot Com Bubble Bursts kunye namawaka eDotComs ayagqabhuka.
Inyani # 3 -Ingxelo:
U-Obafemi nguChristain. Ngapha koko, ukutyelelwa kwiphepha lakhe le-Instagram kuya kukwenza uqiniseke ukuba uyakholelwa, ngakumbi xa ujonga ividiyo yesakhono sokubetha somdlali ohlabayo. Isihloko sevidiyo yivesi yebhaybhile ethandwayo ethi - "Zonke izinto ndinokuzenza ngaye ondinika amandla."
Igama eliphelele UMichael Oluwadurotimi Obafemi
Umhla wokuzalwa Usuku lwe-6 kaJulayi 2000
Indawo yokuzalelwa IDublin eIreland
Ukudlala Indawo phambili
Abazala Afolabi Obafemi (umzalwana).
ukuzenza Ukuqubha, ukuhamba, ukubukela iimovie kunye nokuchitha ixesha elisemgangathweni nosapho kunye nabahlobo
ukuphakama Iinyawo ezi-5, ii-intshi ezi-7
Ubungakanani benethi 1.7 yezigidi zeerandi
umvuzo I-600,000 Euro ngonyaka
Enkosi ngokufunda okubhaliweyo okuqiqayo kwi-biography kaMichael Obafemi. Asithandabuzi ukuba ibali lakhe lobomi likunikeze izifundo kwimfuno yokunika konke onomdla kuko. Ukhe wafumana nasiphi na isivakalisi esingachanekanga okanye esingafanelekanga ngexesha lokunyanzelwa? Ukuba ewe, nceda wenze kakuhle ukunxibelelana nathi okanye ushiye umyalezo kwibhokisi yokuphawula.
I-James Ward-Prowse Childhood Story I-Untold Biography Facts
I-Dusan Tadic Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
Nathaniel Clyne Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts
UAdam Lallana Ibali leBantwana kunye neNdawo engabonakaliyo yobomi
I-Dejan Lovren Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
I-Alan Shearer Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
ULuka Shaw Ubuntwaneni Ibali Plus Untold Biography Facts
I-Virgil van Dijk Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
I-Charlie Austin Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts